သက်ဝေ: June 2010
အမှန်က ဒီပိုစ့်ဟာ ကိုယ့်အတွက် ၂၀၀ မြောက် ပိုစ့်ပါ။ နိုးတဝက် အိပ်တဝက်ညတွေ လွန်မြောက်တဲ့၊ ဘောလုံးပွဲတွေ ပြီးတဲ့ အခါများကျမှ အေးအေးဆေးဆေး အမှတ်တရ တခုခု ရေးမလား တွေးထားတာ…။ သို့သော် ဘယ်အရာမဆို သေသေချာချာ မစူးစမ်းပဲ နမော်နမဲ့ လုပ်တတ်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အကျင့်ဆိုးကြောင့် မရည်ရွယ်ပဲ မနေ့က ပိုစ့်အသစ်တခု တက်သွားပါတယ်။ အမှန်က ကိုပီတိ ဆီမှာ တင်ထားတဲ့ ဘောလုံးပွဲ Update ကို Side Bar မှာ တင်ဖို့ ရည်ရွယ်တာပါ။ နေရာကို သေသေချာချာ မကြည့်ပဲ HTML Code တွေ ကူးပြီး တင်လိုက်မိတာ Side Bar ကို ရောက်မလာပဲနဲ့ ပိုစ့်အသစ်တခု အနေနဲ့ တက်သွားတယ်…။
ခုတော့ မနေ့ကရော ဒီနေ့မှာပါ သက်ဆိုင်ရာ Link တွေကတဆင့် ကိုယ့်ဆီလာပြီး ပျောက်သွားတဲ့ ပိုစ့်ကို လာရှာကြသူတွေ၊ အွန်လိုင်းမှာ အီးမေးလ်မှာ လာမေးကြသူတွေကို အလွန်အားနာလို့ ကြံရာမရဖြစ်ပြီး မကြာသေးခင်က ရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေပဲ အမှတ်တရ တင်လိုက်ပါတယ်…။
ဒါကတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြီးဆုံး Largest Cantilever in the World လို့ ဆိုကြတဲ့ Marina Bay Sands Sky Park ဆောက်လုပ်ဆဲ ကာလကပါ။ အတိအကျ ပြောရရင်တော့ ၂၀၁၀ ဇန်နဝါရီလတုန်းက Fullerton Hotel ဖက်က လှမ်းရိုက်ထားတာပါ။ ကြည့်ပါအုံး… ဟိုးအမြင့်ကြီး တိမ်တွေအနားမှာ ကရိန်းတွေ ထိုးထိုးထောင်ထောင်နဲ့….
အခုတော့ အဲဒီ Sky Park ကို ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ် ကြာသာပတေး ဇွန်လ ၂၅ ရက် နေ့က တရားဝင် စပြီး ဖွင့်လိုက်ပါပြီ။ အများပြည်သူတွေလဲ လက်မှတ်ဝယ်ပြီး သွားလည်လို့ရပါပြီ။ ကိုယ်ချစ်တဲ့ တိမ်တွေကို နီးနီးကပ်ကပ် မြင်ရမယ့် နေရာတခုမို့ သိပ်သွားချင်ပေမယ့် အမြင့်ကို ကြောက်တဲ့စိတ်ကလဲ ရှိနေသေးတော့ လူတွေ တော်တော်များများသွားပြီးမှ အခြေအနေကြည့် သတင်းလေးဘာလေး နားထောင်ပြီးမှ သွားဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်…။ (သတ္တိခဲ သက်ဝေပါ…)
ဒီ နှစ်ပုံထဲမှာ ပထမပုံကတော့ နေနဲနဲစောင်းတဲ့ ညနေ ၆ နာရီ ၁၅ မိနစ် က ရိုက်ထားတာဖြစ်ပြီး ဒုတိယပုံကတော့ နေရောင်လုံးဝ မရှိတော့တဲ့ ည ၇ နာရီ ခွဲက ရိုက်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်တော့မှ မရိုးနိုင်တဲ့ Esplanade ဖက်က လှမ်းရိုက်ထားပါတယ်။ တချို့နေရာတွေကိုတော့ အပြီးမသတ်သေးပဲ Under Construction အနေအထားနဲ့ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
စာမရေးနိုင်တိုင်း ဓါတ်ပုံတွေ (အလွယ်တကူ) ကောက်တင်တယ်လို့ အပြစ်တော် မမြင်၊ အထင်တော်တွေ မလွဲကြစေချင်ပါ။ မနေ့က ကိုယ့်ရဲ့ အမှားကြောင့် ပျောက်သွားတဲ့ ပိုစ့် အစား သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေကို ဒီပိုစ့်လေးနဲ့ မျက်နှာလုပ်တာပါ။ နောက်ရက်တွေမှာ စာအသစ်တင်နိုင်အောင် ကြိုးစားမယ်နော်…။
Posted by သက်ဝေ at 11:15 PM 30 comments:
Labels: On Going, ဓါတ်ပုံ
ကမ္ဘာဖလား ဘောလုံးပွဲ ကိုက်နေတဲ့ သက်ဝေ... စာကောင်းကောင်းမရေးပဲ ရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ တင်လိုက်၊ မျက်နှာစာအုပ်က ပိုစ့်ရယ် ကော်မန့်တွေရယ်ကို ကူးပြီး တင်လိုက်နဲ့ ဆားချက်နေတယ်လို့ ရင်းနှီးသူ တချို့က ပြောလာပါတယ်…။ ဟုတ်ပါတယ်... အလုပ်တဖက်နဲ့ ဘောလုံးပွဲကြောင့် အိပ်ရေးပျက်ရတာတင်မက စိတ်နှလုံး နောက်ကျိစရာ ကိစ္စတချို့ကြောင့် နေရတာ ပျော်လဲ မပျော်၊ စာရေးစရာလဲ ဘယ်လိုမှ အာရုံမရပါ…။ ရေးထားသမျှတွေ အားလုံးကလဲ ဟိုမရောက် ဒီမရောက် တပိုင်းတစနဲ့ အဆုံးသတ်လို့ မရတာတွေ ချည်းပဲဖြစ်နေတာ…။
ဒီလိုအချိန်မှာ မိတ်ဆွေ ကဗျာဆရာတယောက်က ချစ်စရာ ကဗျာလေးတပုဒ် ရေးပြီး အမှတ်တရ ပေးလာပါတယ်…။ ကဗျာလေးရဲ့ နာမည်က အိပ်မက်ထဲက ည တဲ့…။ ဖတ်ကြည့်ပါအုံး…။
အမှောင်နဲ့ အလင်း ရှင်သန်ခြင်းဆိုတာလေ…
အသွင်သာကွဲပြီး ရင်ကွဲတာတူတဲ့ ညတွေ...
ငါ ရထားတဲ့ တပိုင်းတစ ဟောဒီညတွေကို
ငိုနေသူတွေလဲ ဝေမျှ လိုနေသူတွေလဲ ဝေမျှ
ငါ့မှာရှိတာ နေ့နဲ့ ညပါပဲ…
အခုမှ အဆန်းလုပ်ပြီး သက်ကြီးခေါင်းချချိန်
ရောက်တဲ့ နေရာ တခါတလေနား
ငါ့ကိုယ်ပေါ်မှာ တွားသွားနေတဲ့ လမ်းတွေဟာ
ငါ့ရဲ့အထီးကျန်ညတွေအတွက် လမင်းရဲ့လိပ်စာ ရှာဖွေနေကြလေရဲ့...
တည်ကြည်တဲ့ နှလုံးသားမှာ ရူးချင်လဲ ရူးလို့မရ
လှည့်စားလို့ မရတဲ့ နှလုံးသား
ဝယ်ထားပြီး လွှင့်ပစ်ရတဲ့ ပန်းသီးခြင်းတွေရဲ့ည
ခေါင်းကိုက်ခြင်းသာ အဖတ်တင်တဲ့ ဝိုင်ပုလင်းတွေနဲ့ည
သွေးထဲက တမ်းတခြင်းတွေ ကောလက်စထရောကျဆေး သောက်မရ
ဝန်ခံရမဲ့ အသဲကွဲအောင်ချစ်တဲ့ ညတွေ...
မင်း မရှိတဲ့ ညအကြောင်း မေးရင်
ဘဝကို ဆန့်ပေးတဲ့ည မရချင်တော့ပါဘူး
ကူးမယ်ဆို ကူးတော့ ရူးအောင်လွမ်းတဲ့ ညတွေ…
လသာတဲ့ ည ကြယ်စုံတဲ့ ည
ဘယ်လိုည ဖြစ်ဖြစ် ချစ်သူ မရှိမှတော့
ငါ့ ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာ ညတွေ အကုန်
ရင်ငွေ့မီးလှုံ တိမ်တွေစုန်စီး အိပ်ကြမယ်…
မှတ်ချက် ။ ။ သူ ရေးပေးခဲ့ဖူးတဲ့ ကဗျာတပုဒ်ကို ဒီမှာ ဖတ်လို့ရပါတယ်။ အလုပ်တွေ များတဲ့ကြားက အချိန်ယူပြီး ရေးပေးခဲ့တဲ့ ကဗျာဆရာကို ကျေးဇူး အထူး (အထူး) တင်ပါတယ်…။
Posted by သက်ဝေ at 12:20 AM 19 comments:
Labels: ကဗျာ, မိတ်ဆွေများရဲ့ လက်ရာ
ဝမ်းနည်းစရာ ကြားဖြတ်ပိုစ့်လေး တခုပါ…
ဒီနေ့ ညနေပိုင်းက မေးလ်တခု ဝင်လာပါတယ်...။
စာဖတ်ပြီးပြီးချင်း ဝမ်းနည်းပြီး ဘာလုပ်ရမှန်းမသိပဲနဲ့ အချိန်တွေ တော်တော်ကြာသွားပါတယ်…။
Sakura Myanmar ဘလော့ဂ်လေး ပိုင်ရှင်… အေးချမ်းတဲ့ စာလှလှလေးတွေ ရေးတတ်တဲ့... ပန်းအိုးလှလှလေးတွေ ထိုးပြတတ်တဲ့... စားသောက်ဖွယ်ရာတွေ ချက်နည်း ပြုတ်နည်းတွေကို မျှဝေတတ်တဲ့... ပြီးတော့ မကြာသေးခင်ကမှ ချစ်စဖွယ် သမီးလေးတယောက် ပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့... ညီမငယ် နုစံ ရဲ့ ချစ်ရတဲ့ ဖခင် မေလ ၃၁ ရက်နေ့က ကွယ်လွန်သွားပါတယ်…။ ဒါလေးက သူရေးလိုက်တဲ့ စာထဲက တပိုင်းတစပါ…။
“ကျွန်တော် ဇွန်လ ၄ ရက်နေ့က မြန်မာပြည်ကို အရေးတကြီး အကြောင်းပေါ်လာလို့ ပြန်သွားရတယ်... မေလ ၃၁ ရက်နေ့က အဖေဆုံးသွားလို့ပါ... တိုက်ဆိုင်ချင်တော့ အဖေဆုံးတဲ့နေ့က ပတ်စပို့စ်ကို သက်တမ်းတိုးထားတာနဲ့ ကြုံပြီး အားချင်း မပြန်နိုင်ခဲ့ဘူး... ဒါကြောင့် အဖေ့မြေချတာကို မမီလိုက်နိုင်ဘူး... ရက်လည်မှပဲ မီတော့တယ်… စိတ်မကောင်းစရာသတင်းမို့ ဘယ်သူ့မှလည်း မပြောတော့ပဲ ပြန်သွားလိုက်တာပါ...”
နှေးနှေး သွားသွား မြန်မြန် သွားသွား တနေ့မှာ လူတိုင်းသွားကြရမယ့် ရောက်ကြရမယ့် လမ်းတခုဖြစ်ပေမယ့် ဖခင်တယောက်ကို ဆုံးရှုံးရတဲ့ ထိခိုက် ခံစားမှုကတော့ ဘာနဲ့မှ အစားထိုးလို့မရပါဘူး...။ ပြီးတော့ ကိုယ်တိုင်ကလဲ မိဝေး ဖဝေး တကွဲတပြား နေကြရသူတွေချင်းမို့ ကိုယ်ချင်းစာပြီး တကယ် စိတ်မကောင်း ဖြစ်မိပါတယ်…။ စိတ်ကို ဖြေပါ ညီမရယ်လို့ အားပေးရအောင်ကလဲ ဒီလိုအကြောင်းမျိုးကို ဘာနဲ့ ဖြေရမှာလဲ လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်မေးမိတယ်…။
ဒါပေမယ့်လဲ ညီမ ဖေဖေ သက်ရှိထင်ရှားရှိချိန်မှာ ကိုယ့်ကြောင့် သူ စိတ်ချမ်းသာခဲ့ရတာတွေ… ကိုယ့်ကြောင့် သူ ဝမ်းသာပျော်ရွှင်ခဲ့ရတာတွေ… လိမ်မာတဲ့ သမီး တယောက်အနေနဲ့ မိဘအပေါ် ကျေးဇူးဆပ်နိုင်ခဲ့တာတွေ… မိဘကို စိတ်ချမ်းသာစေခဲ့တာတွေ... မြေးမလေးရလို့ အဖိုးတယောက်နေရာက သူ ကျေနပ် ကြည်နူးနေခဲ့ရတာတွေ ကို ပြန်တွေးပါ ညီမ… နဲနဲတော့ ဖြေသာပါလိမ့်မယ် လို့ မရဲတရဲ အားပေးမိပါတယ်…။
ဒီပိုစ့်လေးကို လာဖတ်မိတဲ့ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေလဲ နုစံကို သွားပြီး အားပေးပေးပါလို့ ပြောချင်ပါတယ်…။ ကျေးဇူးနော်…
ညီမငယ် နုစံရဲ့ ဖေဖေ ကောင်းရာ မွန်ရာ ဘုံဘဝ တခုမှာ ငြိမ်းချမ်းပါစေ လို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်…။
Posted by သက်ဝေ at 11:15 PM 12 comments:
Labels: ဆုတောင်း, ဝမ်းနည်းစကား
အခုတလော အိမ်မှာ ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ ချက်မစားဖြစ်တာ ကြာပြီ…။ ဒီတပတ်တော့ မေမေ ရန်ကုန်ကပို့လာတဲ့ ချဉ်ပေါင်ရွက်၊ မျှစ်၊ ပုဇွန်ကြော်တွေ ကြောင့် ဟင်းချက်စားဖို့ရာ အကြောင်းဖန်လာပါတယ်…။ ဒီတော့ စိတ်အား လူအား တိမ်ပြာပြာ နေ့တနေ့ ဆန်းဒေးလေးမှာ ပုဇွန်လေးတွေကို ကြက်သွန်အနီ ကြက်သွန်အဖြူ ဆီသတ်ပြီး ပြန်ကြော်… အဲဒီပုဇွန်ကြော် တချို့နဲ့ ချဉ်ပေါင်ရွက်မွှေ နဲ့ မျှစ်နဲ့ကို ရောကြော်… ငြုတ်သီစိမ်း ထည့်… ပြီးတော့ နဲနဲ စပ်မယ့်ဟင်းတွေမို့ အစပ်ပြေအောင် အရွက်စိမ်း ကြော်ချက်တခုချက် ဖြစ်ပါတယ်…။
ထမင်းစားဖို့ ခူးခတ်နေရင်း တစုံတခုကို သတိရသွားပြီး စားတော့မယ့် ဆဲဆဲလူတွေကို ဟိုး…….. စတော့ပ် လို့ အကျယ်ကြီးအော်… အိပ်ခန်းထဲကို အပြေးဝင်… လက်စွဲတော် နှစ်ကျပ်ခွဲကို ယူ… အချိန် သုံးမိနစ်လောက်ယူပြီး ဓါတ်ပုံနဲ့ မှတ်တမ်းတင်ပါတယ်…။ စိတ်ကူးတုန်းကတော့ စားစရာတွေ လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ မေမေ့ကို ပြန်ပြမလို့ပါ… ရှုမငြီးတဲ့ ချစ်သမီးလေးရဲ့ လက်စွမ်း… ဘာညာ သာရကာတွေ ရေးပြီးတော့ပေါ့လေ…။
ဒီလိုနဲ့ စားသောက်ပြီး အနားယူနေရင်း မီးပူတိုက်ရမှာတွေရှိနေတာကို အသာမေ့ထားပြီး မျက်နှာစာအုပ်ကို လက်ကရောက်သွားတယ်… ဖြစ်ချင်တော့ စားစရာတွေ တင်ထားတဲ့ စာမျက်နှာတချို့ကို ရောက်အသွားမှာ… ခေါင်းထဲက မီးလုံးလေး ဖျတ်ကနဲ လင်းသွားတယ်…။ ဒီတခါလဲ အိပ်ခန်းထဲကို အပြေးဝင်… လက်စွဲတော် နှစ်ကျပ်ခွဲထဲက မှတ်ဥာဏ်ပြားလေးကို ယူ… ဒီလိုနဲ့ သူများတွေလိုမျိုး မျက်နှာစာအုပ်မှာ တင်စရာ တည်ခင်းဧည့်ခံစရာ ဟင်းပွဲလေး ရခဲ့တယ်…။
ဒါတင်မက သူတို့တွေ ချက်ကြ ပြုတ်ကြ စားကြတုန်းက ကိုယ့်ကို မစားရ ဝခမန်း တက်ဂ်ထားကြတဲ့ သူတွေ အားလုံးရော… ကိုယ်က စားစေချင်တဲ့ သူတွေ အားလုံးကိုပါ ကဲ… လာပြီကွ ဆိုပြီး တက်ဂ်လိုက်တယ်…။ တက်ဂ်တာမှ ကိုယ်က သေသေချာချာ တွေးတော စဉ်းစားပြီး တက်ဂ်တာပါ…။ ဥပမာ… ကျန်းမာရေး လိုက်စားတဲ့သူတွေ၊ ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့နေတဲ့သူတွေကို အရွက်ကြော်ချက်ဟင်း၊ မမခင်ဦးမေတို့ အကိုကြီး ကိုအောင်သာငယ်တို့ကိုတော့ လူကြီးတွေမို့ လေးလေးစားစားနဲ့ ပုဇွန်ဟင်း၊ မောင်ငယ် ညီမငယ်တွေ ကိုတော့ လူငယ်ကြိုက် ချဉ်ချဉ်စပ်စပ် ချဉ်ပေါင်ကြော်… စသဖြင့် ရွေးချယ်ပြီးတော့ကို တက်ဂ်တာပါ…။
အဲ… အဲဒီလို တက်ဂ်ပြီး တမိနစ်တောင်မခြား ကော်မန့်တွေ ဝင်လာပါတော့တယ်…။ ထိပ်ဆုံးက ကျွန်တော်ကတော့ ပန်ပန် ဖြစ်ပါတယ်… သူကလဲ သူချက်တဲ့ ဟင်းစပ်ကို အခုလို ရေးပြပါတယ်…။ (ဘုရားရေ… စားချင်စရာ ကောင်းလှပါဘိ…)
တို့အိမ်မှာက ကြက်သားဗူးသီး၊ ငါးကြော်၊ မြင်းခွာရွက်သုတ်၊ ချဉ်ပေါင်ဟင်း၊ ငါးပိထောင်း…
ဒီလိုနဲ့ သူ့နောက်မှာ တောက်လျှောက်တက်လာကြတဲ့ ကော်မန့်တွေ၊ ပြီးတော့ တယောက်နဲ့ တယောက် အပြန်အလှန် ရေးကြတာတွေနဲ့ တခဏအတွင်းမှာ စုစုပေါင်း ကော်မန့် ၆၀ ကျော်သွားပါတယ်…။ ကိုယ်လဲ မော်နီတာကို မျက်နှာက မခွာနိုင် တချိန်လုံး ပါးစပ်မပိတ်နိုင်အောင်ကို ရယ်နေရတော့တာ... တကယ့်ကို တနင်္ဂနွေ အပျင်းပြေပါပဲ…။
အဲဒီ့အကြောင်းကို မမခင်ဦးမေက သူ့ပိုစ့်မှာ ထည့်သွင်း ရေးသားလိုက်တဲ့အခါမှာ အဲဒီထမင်းပွဲနဲ့ ကော်မန့် ၈၀ ကျော်ကို ပြပါလို့ ကော်မန့်မှာရော စီဘောက်စ်မှာပါ မေးလာကြပါတော့တယ်…။ ဒါကြောင့် တောင်းဆိုထားကြတဲ့ သောတရှင်များကို ချစ်ခင်စွာနဲ့ ဒီပိုစ့်လေးကို ရေးပါတယ်...။ ပိုစ့်သိပ်ရှည်သွားမှာစိုးလို့ ကော်မန့်တွေ အကုန်လုံးတော့ ကူးမရေးနိုင်တော့ပါ…။ ပျော်စရာကော်မန့်တချို့တဝက်ကို လူစုံအောင် ရွေးပြီး တင်လိုက်ပါတယ်…။ အချို့က နာမည်ရင်းတွေ နာမည်ဖျားတွေနဲ့ဆိုတော့ ကော်မန့် မှာပါတဲ့ နာမည်တွေကို ဒီအတိုင်းပဲ တင်လိုက်ပါတယ်…။ သူ ဘယ်သူ ဘယ်ဝါ ဆိုတာသိချင်ရင် တိုးတိုးတိတ်တိတ် မေးနိုင်ပါတယ်…။ ကာယကံရှင် ခွင့်ပြုရင် ပြောပြပါ့မယ်…။
Khaing Su Latt
မမသက်ဝေရဲ့ အပျင်းပြေ တနင်္ဂနွေက မီးမီးကို ရန်စနေသလိုပဲး(
အဲ့ဒါတွေအားလုံး ကြိုက်တယ်ဆိုမှ ၊ ချက်လဲချက်တတ်ဘူး ဆိုနေမှ ဟီးးးးးးးးးး
ရက်စက်ချက်တော့ ကန်းကုန်ပဲ T.T
အကုန် စားချင်တယ်။ ဒါနဲ့ အမ ဘောလုံးပွဲမကိုက်ဘူးလား။ :P
ကနေ့တော့ အပျင်းပြေ မိုးအေးတာနဲ့ ရခိုင်မုန့်တီချက်စားတယ်ဗျာ
ပုချွန်ဆိတ်လေးတွေ စားချင်လိုက်ထှာ ဒီမှာပုချွန်တွေကအရသာမရှိဘူးး((
တို့အိမ်မှာ ငါးမုန့်ကြော်ကို ယိုးဒယားစတိုင်လ်ချဉ်စပ်လေး ကြော်တယ်။ မှိုနဲ့မုန်ညင်းကြော်၊ ဗမာရမ်းဟင်းချို…
ဆီများတယ် ရေဝပ်တယ်။ ခြောက်တယ် ညှင်းညှင်း…
ဘာကင်မရာနဲ့ ရိုက်တယ်ဆိုတာ ထည့်ပြောမှ ပြည့်စုံမယ်
ဝိတ်ချနေတဲ့သူ၊ ဝိတ်ချသင့်တဲ့သူနဲ့ ကျန်းမာရေး လိုက်စားသင့်တဲ့သူတွေကို အရွက်ကြော်ချက်မှာ Tag ထားတယ်... အပွက်တော့ ခံရတော့မယ်ထင်တယ်...း))
ပုဇွန် မုန်လာဥ ဒန့်ဒလွန် ပဲပြားပဲ့ပင်ပေါက် ကန်ဇွန်းဥ ဝယ်ပြီး ညက မအိပ်သောကြောင့် ခေါင်းကိုက်ပြိး မချက်တနိုင်သေးရွေ့ ပလာတာဝယ်စားပြီး မလေးထမင်းဖြင့် ညားသွားသူ။
ပန်ဒိုရာက မြန်မာသွေးများတယ်။ ကိုကိုဒီဘီက.. အင်း.. ဘယ်သူချက်တာလဲ
မွန်ကတော့တီလုပ်သွေး နည်းနည်းပါပုံဘဲ။ ဗမာရမ်းဟင်းချိုဆိုတာ ဘာလဲ။ ငါမုန့်ကြောက်က ငါးမုန့်ကြော်ပေါ့ ဘယ်လိုချဉ်စပ်ဖြစ်သွားတာလဲ ။ ပန်ဒိုရာ ဟင်းကို ထပ်ခါတစ်လဲလဲဖတ်နေမိတယ်။
ဒေါ်ဒေါ်ခင်ဦးထုံ.. တရုတ်သွေးတစ်စက်မှ မပါတာ။ ဒီတစ်ခါ စိတ်ရှည်ရှည်ထား ရှင်းပြမယ်။ စာရွက်သွားယူပြီး သေချာမှတ်နော်။ tom yam ကို ဗမာစတိုင်လ်နဲ့ချက်တော့ ဗမာရမ်းပေါ့လေ.. သို့သော် ရမ်းချက်တာမို့ ဗမာရမ်း။ ငါးမုန့်ကြော် ချဉ်စပ်ဆိုတာ ဒီလိုမျိုးပြောတာပါ။ http://thestar.com.my/archives/2009/7/15/central/m_13fish.jpg
ယနေ့ကား ကြာသပတေးနံ ခေတ်စားသောနေ့ ဖြစ်တော့သကိုး၊ ပုဇွန်ဆီပြန်၊ ပုဇွန်ချဉ်ပေါင်မျှစ်ကြော်၊ အရွက်ကြော်ချက်မှာလည်း ပုဇွန်တွေ့တယ်။ အဲဒါ ဗူးညွန့်တွေလား အစ်မ..။
ဂွမ်းပုံ... အင်း... ပုဇွန်တွေ လွှမ်းမိုးနေတယ်နော်... အရွက်စိမ်းက China Puay Leng ဆိုတဲ့ အရွက်ပါ.. နူးညံ့တယ်... Hot Pot ထဲ ထည့်စားကြတာ တွေ့ဖူးတာပဲ...း))
မသိပါဘူး ငါးမုန့်ကြော်ချဉ်စပ်ဆိုတော့သိတဲ့အတိုင် တဂျွမ်းရျွမ်း ကိုက်စားရတဲ့ ပါပလာလို့ ငါးမုန့်ကြော်မှတ်လို့ အဲဒါကို ဘယ်လိုချဉ်စပ်ချက်မှာလဲစဉ်းစားလို့ကို မရတာ။ စူပါထုံ..။
အိမ်မှာ အသုတ်စုံ လုပ်တယ်.. ပြာ ဗိုက်အောင့်နေလို့ အစပ်တွေ စားလို့ မရသေးလို့..း(
ကိုကိုဒီဘီ တို့ မုန့်တီတောင် သွားမစားနိုင်ဘူး..
အိမ်ဝေးတာ နာတယ် ပြာရယ်... (အလဲ့... မိုက်နေရော...)
အီတလီကောင်လေးတွေကတော့ချောတတ်တယ် ဘယ်အချိန်လဲသက်ဝေ. နီးရင်လက်တို့ပေးပါ။ အသက်ကြီးလာတော့ဂလိုပေါ့. ကြက်အိပ် ကြက်နိုး. ပန်ဒိုရာပျောက်သွားတယ်။ မျှော်လိုက်ဦးမယ်။
ပန်ဒိုရာ.. အိုင်စီးယူ... အဲလိုနှုတ်ဆက်ရမယ်။ အခု ငှက်သွားဖမ်းနေတယ် ထင်တယ်။
ပန်ပန်... ဖဘမှ သင့်ကို အလိုရှိသည်... ရောက်ရာအရပ်မှ အမြန်ပြန်လာပါ....း))
ဟင်းတွေက decent ဖြစ်တယ်
ဟေး... တို့ ဆီမှာတော့ ... ဒန်ပေါက်... မုန့်ဟင်းခါး... ဝက်သားတုတ်ထိုး... အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ... နဲ့... အင်းသားဟင်း... ကွယ့်... ညည်းတို့တွေကို... သနားတယ်...း) ဒီဇွီဘီ သတင်းထောက်ကြီး ကိုယ်တိုင် ချက်တာကွယ့်...
လောဆယ် ... အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲ စားနေသကွယ်... ကင်မရာ ပျောက်နေလို့... ဒါ့ပုံတော့ ရိုက် မပေးလိုက်ဘူး... ပဲကျော်ကလည်း ကောင်းမှ ကောင်း...း) ဝက်သားတုတ်ထိုးတွေတော့ ကျန်နေသေးတယ်... စားချင်ရင် ပြော... ဝက်တကောင်လုံးကို တုတ်ထိုး လုပ်ထားတာကွယ့်... နှာခေါင်းတောင်ပါတယ်... မှတ်ကရော...
အပျင်းပြေတနင်္ဂနွေ ဆိုပေမယ့် တို့ကတော့ ချင်းမိုင်မှာ အပျင်းမပြိုင်ပဲ ခွေခေါက်ကာ နေတာပဲ။ သူများချက်ကျွေးတာတွေ စားလို့။ (ငါးပတ်မွှေ၊ ဆူးပုတ်ရွက်ခတ်တဲ့ ပဲဟင်းချို၊ ကန်ဇွန်းရွက်ကြော်၊ ငါးပိရည် ကိုယ်တိုင်ဖျော် နဲ့ သရက်သီးစိမ်းတို့စရာ)
ဟင်... နောက်ကျသွားပြီ တနင်္ဂနွေနေ့တောင် ကုန်တောင်မယ်..
ခုပဲ သူများကလေးမွေးနေ့မှာ ကြက်သားပလာတာ သွားစားပြီး ပြန်လာပါတယ်.. မီတဲ့နေရာက လိုက်တာ
အမ မခင်မင်းဇော်..... ငါးပတ်မွှေ...း((
မွန်းလေး... မီရာ အချစ်နဲ့ လိုက်ခဲ့ပါ...း))
အကုန်ကြိုက်... အကုန်ကြိုက်... :))
Nan Thandar Soe
တဂ်ထားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ မမသက်ဝေ။း)
@မက်မွန်... အီတလီအားပေးတာခြင်းတူလို့ add ထားတယ်နော်။း) အီတလီပွဲကြည့်ပြီး နောက်နေ့ MC ယူမလား စိတ်ကူးနေတယ်။ ဟဲ...ဟဲ..။ :D
@မမKOM, အီတလီကောင်လေးတွေ ချော၍ အားပေးခြင်း မဟုတ်ပါ။ အားပေးမိတဲ့အသင်းက ကစားသမားတွေ ချော၍ နေခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ ;)
ငါးပတ်မွှေ...း(( ရနံသစ်မှာရတယ် ဘာမှ အားမငယ်နဲ့သက်ဝေ အစ်မ ဝယ်စားနေကျ.
ဆူးပုတ်ရွက်နဲ့ပဲလဲ မြန်မာဆိုင်မှာရှိတယ်။ သရက်သီးစိမ်းလဲရှိတယ် အိမ်မှာမရှိတာတစ်ခုဘဲ။
ဘရက်ဒယ်ကနေဆင်းခဲ့ပါ ဘတုတ်ကို… ကောင်းကင်
သွေးတွေတော့ တိုးတော့မှာပဲ ATN…
ကြက်သား ပလာတာ.. အိမ်း…
ကျန်းမာရေး လိုက်စားသင့်တဲ့သူ စာရင်းထဲပါသွားတာ ကျေးဇူးပါနော်...
ချဉ်ပေါင်ကြော်နဲ့ ပုဇွန်အိုးကပ်လေး မိုက်တယ်... အရွက်ကြော်ချက်ကတော့ ကျန်းမာရေးအတွက်ပေါ့နော်...
ဟုတ်တယ် ပြာပြာ... West ကို ပြောင်းလာခဲ့ပါ...
အဲ.. ပလုတ်တုတ်... Rose ကို နေရာချပေးတာ မှားတွားဘီ... နောက်တခါကျ သေသေချာချာ ကြည့်ပြီးချပါ့မယ်...
Avo Ca Do
အမသက်ဝေ ကြိုက်တယ် တီကွန် ဒါကြိုက်တဲ့ထဲပါတဲ့ အစားစာဖြစ်နေလို့ပါ ဟီးး
အားကျမခံပြန်ကြွားသွားမယ် ဒီနေ့ nasi lemak ၀ယ်စားတယ်
မမသက်ဝေရဲ့ အပျင်းပြေ တနင်္ဂနွေက စည်ကားလိုက်လေခြင်းး)
Mae Win Naing
နှိပ်စက်တယ်.. အဲ့ဒီပုဇွန်ဆိတ်က my favourite food!! ပို့ပေးပါ မမသက်ဝေ
အခုလောလောဆယ်တော့ ဓါတ်ပုံလေးပဲ ကြည့်ထားပါ မေ... အခါအခွင့်သင့်တာနဲ့ လေဟုန်စီးပီး လာပို့ပေးမယ်... ဟုတ်ပြီလား...း))
ညီမ ချဉ်ပေါင်ကြော် ကြိုက်တာ ဘယ်လိုများ သိသနော်။
နေ့လည်က မှိုကင်စားရတယ်။ ညနေ ကြက်သားသုပ်နဲ့ ကြာဇံဟင်းခါး.. ခုပဲစားပြီးတယ်။း)
အစားအသောက်စုံအောင် ချက်စားတာ ဘာမှ မပြောကြပါနဲ့တော့...။
ဘဲဥသမားကို ကြင်နာပါ။ :(
message မဟားဒယားဝင်လာလို့ လန့်တောင်သွားတယ်..
လက်စသတ်တော့ သူကိုး.. ညှင်းညှင်း
အမကတော့လုပ်ပြီ... ကန်စွန်းရွက်ကိုမှ တက်ရတယ်လို့... :P
နောက်တခါဆို လှမ်းသာခေါ်လိုက် ၅မီနစ်အတွင်းအရောက်လာမယ် :P
ဟီး.. အလိုရှိနေတာ အခုမှသိတယ်... ကုန်တွားပီ.. ချောဒီး…
ကဲ… အပျင်းပြေ တနင်္ဂနွေ… သက်ဝေရဲ့ ထမင်းပွဲ အကြောင်းကတော့ ဒါပါပဲ…။ နောင်ကိုလဲ အခါအခွင့်သင့်လေတိုင်း (ထမင်းဟင်း သေသေချာချာ ချက်စားဖြစ်လေတိုင်း) အခုလို တနင်္ဂနွေ အပျင်းပြေလေးတွေ လုပ်ပါအုံးမယ်…။ မျက်နှာစာအုပ်မှာ တပျော်တပါး အားပေးခဲ့ကြတဲ့ ကွန်မန့်ပိုင်ရှင်များကို ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်…။ မျက်နှာစာအုပ်မှာ မရှိလို့ အားမပေးလိုက်ရတဲ့ အပေါင်းအသင်းတွေကိုလဲ ဒီတခါတော့ ဒီနေရာမှာ တက်ဂ်ပြီး ဧည့်ခံကျွေးမွေးတယ်လို့ သဘောထားပေးပေါ့နော်… ။
Posted by သက်ဝေ at 7:10 PM 28 comments:
Labels: စားဖွယ် သောက်ရာ
အပူ အအေး အရိပ်အာဝါသ…
လမ်းသွယ်တွေ ခွဲထွက်ပုံခြင်း မတူ…
ချောမွေ့ခြင်း ကြမ်းတမ်းခြင်းတွေ ကိုယ်စီနဲ့
တန်ဖိုးထားရာ အဆုံးသတ် ပန်းတိုင်တွေ မတူညီကြတဲ့ လမ်းကလေးတွေပါ…
ထူးထူးခြားခြားတွေ မဟုတ်သလို ရှည်ရှည်လျားလျားတွေလဲ မတွေးကြစေချင်ပါ…။ ဒီပုံလေးတွေကိုကြည့်ပြီး အပေါ်မှာရေးခဲ့သလို မတူညီတာလေးတွေကို တွေးမိသွားစေဖို့ပဲ ရည်ရွယ်ပါတယ်…။
လူတိုင်းဟာ ကိုယ်ယုံကြည်ရာ လမ်းမတွေပေါ်မှာ ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ် လျှောက်လှမ်းနေကြတာမို့ ကိုယ်လျှောက်နေတဲ့ လမ်းနဲ့ မတူညီတဲ့ လမ်းတခုပေါ်မှာ လျှောက်နေတဲ့သူတယောက်ကို လမ်းမှားနေတယ်လို့ မပြောနိုင်ပါဘူး။ ဒီလိုပဲ ကိုယ်လျှောက်နေတဲ့လမ်းကို မှားနေတယ်လို့ ပြောလာရင်လဲ ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်လျှောက်လှမ်းနေတဲ့လမ်းရဲ့ အမှား အမှန်၊ ကောင်းကျိုး ဆိုးကျိုးတွေတိုင်းဟာ ကိုယ်တိုင်နဲ့သာ သက်ဆိုင်ပါတယ်…။ ကိုယ့်ရွေးချယ်မှုဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သာ ရောင်ပြန်ထင်ဟပ်စေပါတယ်…။
အရိပ်အာဝါသကောင်းပြီး ချောမွေ့ဖြောင့်ဖြူးတဲ့ လမ်းကလေးတွေကို ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ ရွေးချယ်ပြီး သာယာ ချမ်းမြေ့စွာ လျှောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေ…။
(ပုံလေးတွေကို Pasir Ris Green မှာ ရိုက်ခဲ့ပါတယ်…)
Posted by သက်ဝေ at 8:20 PM 29 comments:
Labels: On Going, Thoughts, ဓါတ်ပုံ
ဒီနေ့ တနေ့လုံး အပြင်သွားနေတယ်…
ကိုယ်နဲ့ကျမှ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်… ရောက်သွားတဲ့ နေရာတခုမှာ မထင်မှတ်ပဲ ကိုယ်သဘောကျတာတွေကို တွေ့လိုက်ရတယ်…။ ဖြစ်ချင်တော့ လက်ထဲမှာ နှစ်ကျပ်ခွဲကလဲ အဆင်သင့်ပါသွားတယ်…။ ဒီလိုနဲ့ပဲ ဒီဓါတ်ပုံတွေ ရလာခဲ့တယ်…။
အချိန်အခါနဲ့ အခြေအနေနဲ့ လိုက်ဖက်နေလို့ အမှတ်တရ တင်လိုက်ပါတယ်…။ ကိုယ်တိုင်က သဘောကျနေတာမို့ ကိုယ့်အတွက် ကံကောင်းတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပေမယ့် ဘလော့ဂ်ဖတ်လာ မိတ်သဟာတွေအတွက်တော့ ကံဆိုး ကံကောင်း မသေချာပါ…။
သို့သော် ကိုယ်နဲ့ ဝါသနာတူ အကြိုက်တူသူများအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်…။
ဝါသနာမပါလို့ မနှစ်သက်တဲ့သူတချို့အတွက် မျက်စေ့နောက်စရာများ ဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ဆောရီးပါလို့ တောင်းပန်ပါတယ်…။
Posted by သက်ဝေ at 11:45 PM 17 comments:
ပရိတ်သတ် အများ မျှော်လင့်တောင့်တနေကြသော ကမ္ဘာ့ဖလား ဘောလုံးပွဲများ စတင်တော့မည်…။ အချိန်ရှိသည် မရှိသည် အပထား… ကြည့်နိုင်မည် မကြည့်နိုင်မည် မသေချာသည်ကို မတွေး… သူများတွေ နည်းတူ ကိုယ်လဲ Singtel Mio TV လိုင်းမှာ စာရင်းပေးလိုက်သည်…။ စောစောစီးစီး ပျံသန်းသော ငှက်ငယ်တွေကို ဈေးလျှော့ပေးသည့် အစီအစဉ်ကြောင့် ထိုရက်ကို အမှီ ဝီရိယရှိရှိဖြင့် ကြိုးစားလိုက်ရာ စလုံး ၂၄ ဒေါ်လာခန့် သက်သာသွားချေ၏။ စီးတဲ့ရေ ဆည်တဲ့ ကန်သင်း ဆိုသည်မှာ ဒါမျိုးပဲ ဖြစ်ရမည် ဟု တွေးရင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကျေနပ် ပီတိ ဖြစ်နေမိသေးသည်…။
Singtel ကို စာရင်းမပေးခင်မှာ ညကြီး အချိန်မတော်တွေ အိပ်ရေးပျက်ခံပြီး တကယ်ကော ကြည့်နိုင်မှာလား ဟု အမျိုးသားက မေးလာသည်။ ကိုယ်တိုင်က အားကစားစိတ်ဓါတ် အပြည့်အဝ ရှိသူတယောက်မို့ အို… ဘယ်အချိန်ဖြစ်ဖြစ် ကြည့်မှာပဲ၊ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတာ ကျောင်းစာ နဲ့ အားကစား... ဟု ပြောင်ချော်ချော်နှင့် အဖြေပေးလိုက်သည်။ အရေးထဲမှာ ဘောလုံးပွဲတွေ ကြိုက်တတ်သော ဖေဖေ နှင့် မေမေကလဲ ရန်ကုန်ကို ခဏ ပြန်သွားကြသည်…။ သည်တော့လည်း ကိုယ် တယောက်တည်းပဲ ကြည့်ရမည်ပေါ့…။ (မှတ်ချက် - အမျိုးသားက ဘောလုံးပွဲ ကြည့်လေ့မရှိပါ၊ သူ စိတ်ဝင်စားတာက လေယာဉ်ပျံတွေသာ ဖြစ်သည်)
သည်နှစ် ကမ္ဘာ့ဖလားပွဲစဉ် အချိန်များကို ကြည့်ရသလောက်က သိပ်မဆိုးလှ။ အုပ်စုပွဲတွေ အားလုံးက စင်္ကာပူ အချိန် ညနေ ၇ နာရီခွဲ၊ ည ၁၀ နာရီ နှင့် မနက်အစောကြီး ၂ နာရီခွဲတို့ ဖြစ်သည်။ ည ၇ နာရီခွဲ နှင့် ည ၁၀ နာရီ ကတော့ သေချာသည်… အချိန်ကောင်းတွေ…။ အဲ… မနက် ၂ နာရီခွဲကတော့ နဲနဲရှော့ခ် ရှိသည်…။ သို့သော်လည်း ပွဲ ကောင်းလျှင် ကောင်းသလို ညဦးပိုင်း စောစောအိပ်ပြီး ညလယ်မှာ နှိုးစက်ပေးကာ ထကြည့်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားသည်။
သည်လိုနှင့် တနေ့က ထူးထူးဆန်းဆန်း ကိုအောင် (ပျူနိုင်ငံ) မှ ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ အတွက် Tag လုပ်လာသည်…။ ကိုယ့်အတွက် လောလောဆယ်မှာ တက်တက်ကြွကြွ စိတ်ဝင်စားနေသော ခေါင်းစဉ်ဖြစ်သဖြင့် ချက်ချင်းကို ရေးချင်မိသည်။ သို့သော်… ခေါင်းစဉ်နှင့် အကြောင်းအရာ အနေအထားအရ အမျိုးသား ဘလော့ဂ်ဂါတွေ အရင်ရေးဖို့ သင့်တော်ပေသည် ဟု ယူဆသောကြောင့် ခဏ စောင့်နေလိုက်သည်…။ မနေ့က မိတ်ဆွေကြီး ကလူသစ် နှင့် ကိုကြီးကျောက် တို့ ရေးပြီးချေပြီ။ အခုတော့ ကိုယ် အလှည့်ပေါ့…။
ကိုယ်ကြည့်ရ တွေးရသလောက်တော့ ဒီနှစ် အသင်းတွေထဲမှာ ဘရာဇီး ကို နိုင်လိမ့်မည်ဟု မှန်းချင်သည်…။ ဘရာဇီးအသင်းမှ ရုပ်သိပ်မချောလှသော်လည်း အမြဲတမ်း ပြုံးနေတတ်သော… ချစ်စရာကောင်းပြီး ဘောလုံးကန်တာ တော်သော Ronaldinho လေးကို သဘောကျသည်။ Fabiano နှင့် Kaka ကိုလဲ ကြိုက်သည်…။
သို့သော်… သို့သော်… ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာ တခုတည်းကို မျက်စေ့စုံမှိတ်ပြီး ပြောရလျှင် အင်္ဂလန်အသင်း အနိုင်ရ ဗိုလ်စွဲတာကိုသာ မြင်ချင် တွေ့ချင်မိသည်ပေါ့…။ ကိုယ် အစွဲအလမ်းတွေ မထားတတ်ပါ… အမှန်ကတော့ မန်ယူ မှလာသော သံယောဇဉ်တချို့ကြောင့်သာ ဖြစ်နိုင်ပါသည်…။ (အလဲ့…)
အသက်ငယ်သလောက် စိတ်ဆိုးလွယ်၊ ဒေါသဖြစ်လွယ်တတ်သော လူဆိုးလေး Rooney ၊ လူကြီးလေးနှင့် ပိုပိုတူလာသော Ferdinand ၊ ကျွန်တော်ဟာ ငယ်ငယ်က လူဆိုးလေးပါ ဆိုသော Gerrard တို့ အပြင် တလောက နာမည်ကြီးလိုက်သော Terry ၊ နာမည်ချင်း ဆင်သော်လည်း သွေးမတော် သားမစပ် A Cole နှင့် J Cole ၊ ပြီးတော့ Lampard ၊ အရပ်ရှည်ရှည် ကလန့်ကလားနှင့် Crouch တို့ပါဝင်သော အင်္ဂလန်အသင်းကို (မဖြစ်နိုင်လောက်မှန်း သိနေသော်လည်း) သိသိကြီးနှင့် ကမ္ဘာ့ဖလားပိုင်ရှင် ဖြစ်စေချင်မိသည်…။ ဒါတောင် အင်္ဂလန်နိုင်ငံသားကြီး Beckham နှင့် Owen တို့မပါလို့ စိတ်ထဲ သိပ်မကျေနပ်ချင်…။
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အင်္ဂလန် အသင်းကို ဗိုလ်မစွဲလျှင်တောင်မှ အနည်းဆုံး ဆီမီးဖိုင်နယ် အဆင့်လောက်အထိတော့ ရောက်လာစေရန် ဆုတောင်း မျှော်လင့်နေမည်…။ စောစောစီးစီး ရှုံးပြီး ပြုတ်သွားလျှင် သူတို့လေးတွေကို အချိန်ကြာကြာ မမြင်ရတော့မှာ စိုးသောကြောင့် ဟု ဆိုလျှင် ကိုယ့်ရင်ထဲက အားကစား စိတ်ဓါတ်ကို သင်တို့ အပြစ်မြင်ကြမည်လော…။ (အပြစ်မမြင်ကြပါနှင့်… ချစ်ခင်ကြပါ…)
အိုကေ… သည်နှစ် ဆီမီးဖိုင်နယ်လ်အတွက် အင်္ဂလန်၊ ဘရာဇီးလ်၊ အာဂျင်တီးနား၊ အီတလီ နှင့် ကမ္ဘာ့ဖလား ပိုင်ရှင်အဖြစ် ဘရာဇီးလ် ကို မှန်းထားသည်…။ (မှန်းထားတာ မှန်လျှင် မုန့်ဝယ်ကျွေးပါ ကိုအောင်…)
ကမ္ဘာ့ဖလား ဘောလုံးပွဲတွေ နှင့် ပတ်သက်ပြီး ကိုယ့်ဆီမှာ အခြား ကြိုကြိုတင်တင် ပြင်ဆင် လုပ်ဆောင်စရာတွေလဲ များစွာ ရှိနေသေးသည်…။ အဓိက ကတော့ ညဖက်တွေ အိပ်ရေးပျက်ပြီး မနက် ရုံးချိန် နောက်ကျနိုင်ခြင်း နှင့် မနက် အိပ်ရာမှ လုံးဝ မထနိုင်သော နေ့ရက်များတွင် ရုံးကို အရေးပေါ် ခွင့်တိုင်ရဖွယ်များ ရှိလာနိုင်ခြင်း တို့ကြောင့် အထက်လူကြီးကို နဲနဲကြိုပြီး မျက်နှာချိုသွေးထားရန်၊ ထိုရက်များတွင် အိမ်မှာ ထမင်း ဟင်း အလျင်မီအောင် ချက်နိုင်လိမ့်မည် မဟုတ်သောကြောင့် အိမ်သားများကို စည်းရုံးရေးဆင်း နှစ်သိမ့် ညှိနှိုင်းပြီး အိမ်နားမှ ကြက်ဆီထမင်းကို ကန်ထရိုက်ဆွဲထားရန် တို့ဖြစ်သည်…။
ဒါတွေအပြင် မျက်လုံးအစုံမှာလဲ ပန်ဒါ ဝက်ဝံလေးတွေလို ဖြစ်နိုင်သေးသဖြင့် လိမ်းစရာ Eye Cream တခုခု အသင့် ဝယ်ထားရန်လဲ စဉ်းစားထားသည်…။ ပြီးတော့ ညလယ်မှာ ဘောလုံးပွဲကြည့်ရင်း စားစရာ ဟိုဟိုဒီဒီ မုန့်ပဲသားရည်စာများ ဝယ်ထားရန်ကိုလဲ မေ့နေလို့မဖြစ်…။ သည်ရက်တွေမှာ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် ကြိုတင် ပြင်ဆင် အောင်ပွဲဝင် ဆိုသော စကားကို သတိရနေမိသည်…။
ပြီးတော့… ကြုံတုန်းလေး တလက်စတည်း ပြောထားချင်ပါသည်။
ထို ဘောလုံးပွဲရက်တွေမှာ ဘလော့ဂ်မှာ၊ မျက်နှာစာအုပ်မှာ၊ အွန်လိုင်းမှာ သက်ဝေတယောက် ပေါ်လိုက် ပျောက်လိုက် ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နေနိုင်သည်။ အပေါင်းအသင်း ရောင်းရင်းများနှင့် အတတ်နိုင်ဆုံး အဆက်မပြတ်စေရန် ကြိုးစားမည်… သို့သော် မတွေ့လျှင် စိတ်မပူကြပါနှင့်။
ဘောလုံးပွဲကို ဘယ်လောက်ပဲ စွဲလမ်းပါစေ၊ ဘလော့ဂ်ကိုတော့ သံယောဇဉ် ဖြတ်မသွားပါ…။ သည် ကမ္ဘာ့ဖလား ဘောလုံးပွဲကြီး ပြီးတာနှင့် ပြန်လာမည် ပြန်ချစ်မည်…။
Posted by သက်ဝေ at 9:30 PM 28 comments:
8 SOOCAS H5 Negative Ion Hair Dryer 1800W Professional Blow Dryer Aluminum Alloy Powerful Electric Dryer Cold Hot Air Circulating Soocas h5 negative ion hair dryer 1800w professional blow dryer - If you are looking for SOOCAS H5 Negative Ion Hair Dryer 1800W Professional Blow Dryer you've visit to the right web. We have 8 Images about SOOCAS H5 Ne...
ဓာတျပုံရိုကျခွငျး အနုပညာ - ၁ - ဓာတျပုံရိုကျခွငျး အနုပညာဆိုလို့ ‌ပရျောဖကျရှငျနယျ ရိုကျခကျြတှလေို့ မထငျလိုကျပါနဲ့။ ကငျမရာအကွီးကိုတောငျ အျောတိုမုတျနဲ့ပဲ ရိုကျတဲ့သူပါ။ အိုငျဖုနျးအသဈက ကငျ...
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုနှင့် တရားမဝင်ရောင်းဝယ်မှုများ ပပျောက်စေရေး - ယခုနှစ် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန်လ ၂၆ ရက်နေ့သည် (၃၅) ကြိမ်မြောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မူးယစ်ဆေးဝါး အလွဲသုံးမှု နှင့် တရားမဝင် ရောင်းဝယ်မှု တိုက်ဖျက်ရေးနေ့ (Intern...
ဇျောဂြီ-ပနျးပနျလကျြပဲ (ပါဠိ) - ပနျးပနျလကျြပဲဇျောဂြီပါဠိဘာသာပွနျ – နတ်ထိ
လူလလေူလှငျ့ - အတှေးတှကေ ဟိုတစ ဒီတစ၊ စုမရ သိမျးမရ၊ ဆောငျးဦးလေ ခပျသော့သော့မှာ လှငျ့ခငျြရာလှငျ့နကွေပွနျသညျ။ စိတျထဲပျေါလာသညျ့ စကားလုံးလေးတှကေို စာရှကျပျေါ ခခြငျးကွညျ့သညျ။ စက...
တောငျဇောကျထိုး Grand Canyon ခရီး - ဤခရီး၏ အစသညျ လှနျခဲ့သော ၁၅ နှဈကဟု ဆိုကောငျးဆိုနိုငျသညျ။ ထို့ထကျလညျး ပိုကောငျးပိုနိုငျသညျ။ လှနျခဲ့သော ၁၅ နှဈ အမြိုးသား စင်ျကာပူကုမ်ပဏီရုံးခှဲမှာ အလုပျ စ ဝ...
Another Christmas Day - *Another Christmas Day* *Will come and go away* *I got so far to go* *But I want to go home *
မပကျြသုနျးမီ - *ဉာဏျပညာရယျ ခဈြခွငျးတရား အရေးကွီးဆုံး ၂ ခုမှာ တဈခုလောကျပွညျ့စုံရငျတောငျ လောကကွီးက အသကျရှူခြောငျနဦေးမှာပါ။ ခကျတာကလညျး ခငျဗြားမှာ တဈခုလေးတောငျ ရှိမနတောပ...
NUG က နိုငျငံတဈဝနျး တျောလှနျရေးစတငျပွီဖွဈကွောငျး အရေးအပျေါအခွအေနကွေညော - ၂၀၂၁ ခုနှဈ၊ ဖဖေျောဝါရီလ (၁)ရကျနတှေ့ငျ မတရား သိမျးပိုကျကာ အာဏာလုယူခဲ့သော အာဏာသိမျး စဈကောငျစီအား အမွဈဖွတျခမြှေုနျးရနျအတှကျ အမြိုးသားညီညှတျရေးအစိုးရ (Nati...
ရှင်သန်ခြင်းရွင်သန်ျခင်း - ရှင်သန်ခြင်း က နေရာတကာ မှာ ရှိနေတာ ကို ကြည့် ပြာအိအိ မိုးကောင်းကင်အထက်မှာ ခပ်နွဲ့ နွဲ့ လေပြေအေးအောက်မှာ မြေဆီအနှစ်မရှိပဲ နဲ့ တောင် ရှင်သန်နေတဲ့ ငါ့လျှောက်...
တရားသောစဈ - မမွငျရပမေဲ့ ကွားနရေတဲ့သတငျး ငါ့ရငျထဲမှာ ပူလောငျဆဲ တိုငျးပွညျအတှကျ အသကျစှနျ့တိုကျနတော စဈသားတှမေဟုတျမှနျး သိလာကွတဲ့နောကျ တိုငျးပွညျကို ဖကျြစီးနကွေတ...
နညေိုခြိနျ - နညေိုခြိနျတှကေို အရမျးကွိုကျတယျ၊ နဝေငျ‌နေထှကျခြိနျထကျလှတာဆိုလို့ မငျးပဲရှိတာ့တယျ။
ဘလော့ဟောင်းလေးကို ဖုန်ခါခြင်း - မရေးဖြစ်တာ အတော်လေးကို ကြာနေပါပြီ.. သားသားအကြောင်းတွေ ရေးထားတာပြန်ဖတ်မိတော့ ကြည်နူးမိရလို့ သမီးလေးအကြောင်းတွေပါ မှတ်တမ်းလေးတစ်ခု ရှိနေချင်လို့ ဆက်ရေးချင်စိ...
မွငျးခွံမွို့၊ ကိုးဆောငျတိုကျ ဆရာတျောဘုရားကွီး ဘဒ်ဒန်တသောဘိတ - မန်တလေးတိုငျး၊ မွငျးခွံမွို့၊ ကိုးဆောငျတိုကျ ဆရာတျောဘုရားကွီး ဘဒ်ဒန်တသောဘိတ ( အဘိဓဇမဟာရဠဂုရု၊ အဘိဓဇအဂ်ဂမဟာသဒ်ဓမ်မဇောတိက ) photo : နိုငျငံတျောသံဃမဟာနာယကအဖှဲ...
အိမ် ခြံ ကား ဝယ်ရန် အခွန် ကင်းရှင်းကြောင်း စာရွက်စာတမ်း ရယူနည်း - စင်ကာပူမှာအလုပ် လုပ်ပြီး အခွန်ဆောင်ထားသူများ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တိုက်ခန်း/ကား ဝယ်ယူရာတွင် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရ ရန် စာရွက်စာတမ်း များကိုအောက်ပါ အတိုင်း ဆောင်ရ...
ဇငျလငျး – နှဈသဈကူးပွနျပေါ့ … - ဇငျလငျး – နှဈသဈကူးပွနျပေါ့ … (မိုးမခ) ဧပွီ ၁၈၊ ၂၀၁၉ – နှဈတှေ နှဈတှေ သဈလိုကျ ညဈလိုကျနဲ့ သဈခဲ့ပေါငျးလညျး မြားလှပေါ့၊ ညဈခဲ့ပေါငျးလညျး မြားလှပေါ့ – သစ...
Announcement - *Dear readers,* *It have been almost3years since I posted the last post in my blog. As you all know, blogger is no longerapopular social media anymore,s...